Juventus oo u soo gudubtay Semi Final, markii ay ka gudubtay Monaco | Dhacdo.com
Home Ciyaaraha Juventus oo u soo gudubtay Semi Final, markii ay ka gudubtay Monaco
Juventus oo u soo gudubtay Semi Final, markii ay ka gudubtay Monaco
Kulan dhex maray kooxaha AS Monaco iyo Juventus ayaa ku dhamaaday barbaro gool la’aan ah taas oo kooxda Allegri ka caawisay inay u soo baxdo wareega afar dhamaadka Champions Leaque-ga. Kadib markii ay kulankii hore ee garoonkeeda ka dhacay ay Juventus 1:0 guul kaga soo gaadhay kooxda Monaco ayay kulanka lugta dabe labada kooxood galeen barbaro gool la’aan ah.Juvetus ayaa afar dhamaadka Champions Leaque-ga kula soo biirtay kooxaha Barcelona, Bayern Munich iyo Real Madrid.
AS Monaco ayaa garoonkeeda Stade Louis II ku soo dhawaysay kooxda Juventus kulanka lugta labaad ee wareega sideed dhamaadka Champions League iyagoo u baahnayd inay dhanka kale u rogaan guuldaradii 1-0 ahayd ee ay kala soo kulantay Bianconeri kulankii ka dhacay garoonka Juventus oo uu Arturo Vidal udhaliyay goolka kaliya oo rekoodhe ahaa.Allegri ayaa 11 kan ciyaartoy shaxdiisa ku bilaabay.
Kooxda ree France ayaa doonaysay in iyada oo ka faa’iidaysanaysa garoonkeeda iyo jamaahiirteeda ay guul ka gaadho kooxda Juventus oo ay iydana xili ciyaareekan ka go’antahay inay meel fiican ka gaadho horyaalka yurub ee Champions Leaque-ga. Juventus ayaa u baahnayd inay ugu yaraan ilaashato guushii ay garoonkeeda ku soo gaadhay haddii ay shabaqa ka soo taabato Monaco ayay ogayd inay ciyaarta dili karto.Monaco ayaa iyaduna 11 kan ciyaartoy ciyaarta ku soo gashay.
Kulankan ayaa ahaa kulan adag oo ay labada kooxoodba ku doonayeen inay ugu soo baxaan wareega afar dhamaadka Champions Leaque-ga, laakiin labada kooxood ayayna qaybta hore u suurtogalin inay wax gool ah iska dhaliyaan. Inkasta oo ay fursado fiican abuureen ayay haddana labada kooxood min hal bartilmaameed oo kaliya sameeyeen.Monaco ayaa ahayd kooxda bosishanka inta badan haysatay halka Juventus ay ilaashanaysay guushii ay hore ugu soo gaadhay garoonkeeda. waxayna qaybta hore ee ciyaarta ku dhamaaday barbaro gool la’aan ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay noqotay mid ka sii adag qaabkii ay ahayd 45 kii daqiiqo ee aybtii hore ee ciyaarta. Juvetus ayay markasta muhiimadeeda kowaad ahayd inay shabaqeeda ilaashato si ciyaartu ugu yaraan ugu dhamaado babaro gool la’aan ah oo ay iyadu ku soo baxaysay.
Inkasta oo ay Monaco dadaal badan samaysay isla markaana ay udagaalantay inay gool dhaliyso ayay hadana ku guuldaraysatay inay hal mar soo taabato shabaqa Buffon uu ilaashanayay.Monaco ayaa heshay fursado ay goolal ku dhashan lahayd laakiin goolhaye Buffon iyo difaaca Juve ayaa si fiican iskaga ilaaliyay halistii Monaco.
Ugu dambeen ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbaro gool la’aan ah waxaana sidaa afar dhamaadka Champions Leaque ugu soo baxday Juventus oo muddo ka maqnayd. Juve ayaa afar dhamaadka la ciyaari doonto mid ka mid ah saddexda kooxood ee Bayern Munich, Barcelona iyo Real Madrid.